भारतलाई लाग्यो अहिले सम्मकै ठुलो धक्का : चीनका ६ बन्दरगाह प्रयोग गर्न प्रस्ताव, चीनले दियो नेपालको लागि अर्को ठुलो मौका (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) – पुरा पढ्नुहोस्……
भारतलाई लाग्यो अहिले सम्मकै ठुलो धक्का : चीनका ६ बन्दरगाह प्रयोग गर्न प्रस्ताव, चीनले दियो नेपालको लागि अर्को ठुलो मौका (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
काठमाडौं । नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा बन्दरगाह प्रयोगका लागि चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल–चीनबीच भएको पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका ६ वटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रोटोकल प्रस्ताव गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जनता पोष्टलाई जानकारी दिए ।
क्वाङ्चाउ र साङ्घाई दुवै बन्दरगाह नेपालबाट करिब साढे ४ हजार किलोमिटरको दुरीमा पर्छन् । ‘साङ्घाई’ सिंगापुरपछिको विश्वकै दोस्रो व्यस्त सामूद्रिक बन्दरगाह हो । क्वाङ्चाउ सातौं व्यस्तमा पर्छ ।
‘यो प्ररम्भिक चरणको प्रोटोकल हो,’ उनले भने,’ ‘हामीले ६ वटै बन्दरगाह विज्ञहरूको सुझावका आधारमा प्रस्ताव गरेका हौं । चीनले बन्दरगाह प्रस्तावसम्बन्धी प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएपछि नेपालपक्षले स्थलगत अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
सन् २०१६ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ पक्षबीच नेपाललाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि चीनका बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रमुख रुटको सुविधा दिने विषयमा सम्झौता भएको थियो । अहिले नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको करिब ९९ प्रतिशत व्यापारमा भारतीय रुट प्रयोग गर्दै आएको छ । चीनसँग बन्दरगाह प्रयोगको प्रोटोकलमा सहमति भए अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय रुटमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ ।
यद्यपि यस विषयमा चीनसँग सहमति जुटे तापनि पूर्वाधार अभावका कारण तत्कालै नेपालले चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था भने नरहेको मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘भारतको विशाखापटनम् त अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन भने पूर्वाधार नै नबनी चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न त्यति सजिलो छैन ।’
चिनियाँ बन्दरगाह र नेपालसम्मको भौगोलिक सम्पर्कका जानकारहरूको भनाइमा कमजोर पूर्वाधार र अत्याधिक उचाइका कारण चीनले सहमति जनाए पनि नेपालले तत्काल तेन्जिङ बन्दरगाह प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल र चीनबीच ६ हजार ७ सय यार्ड क्षेत्रफलमा रहेका हिमालहरू छन् । बाह्रै मास हिमपात हुने त्यस क्षेत्रमा रेलमार्गको सम्भावना पनि न्यून रहेको भट्टले बताए । काठमाडौंदेखि चीन जोड्ने एउटै प्रमुख मार्ग छ, जसमार्फत् दक्षिण चीनमा पर्ने बन्दरगाहसम्मको सिधा दुरी दुई हजार कोस पर्छ । यो पूर्वी भारतको हल्दिया बन्दरगाहभन्दा दोब्बर हो ।
लामो समयदेखि नेपालले भारतको कोलकातालाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । समय बखतमा नाकाबन्दी, बाढी तथा भारतीय नीतिमा आउने परिवर्तनले सामान आयात–निर्यातमा ठूलो समस्या देखा परेको छ । यसले गर्दा ठूला पानीजहाजबाट सिंगापुर, श्रीलंका र हङकङमा अर्को जहाज फेर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको विकल्पस्वरूप भारतको विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोगको सम्झौता गरेको थियो ।
अमेरिकी राज्यहरूमा गाँजा खोल्ने क्रम बढेपछि अमेरिका–मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध कम भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
मेक्सिकोसँग सीमा जोडिएका क्यालिफोर्निया लगायत राज्यमा गाँजा वैधानिक भएपछि १३ प्रतिशत अपराध कम भएको पाइएको हो।
गाँजा खुला गर्दा अमेरिकामा हुने अपराधमा पर्ने असरबारे ‘द इकोनोमिक जर्नल’ ले गरेको अध्ययनले यो नतिजा दिएको हो।
अमेरिकामा प्रयोग हुने गाँजाको ठूलो परिमाण मेक्सिकोबाटै आउँछ। त्यहाँ मुख्यतया सातवटा समूहले अवैधानिक लागुऔषध कारोबार गर्दै आएका छन्। यसमा गाँजा मुख्य छ।
‘अहिलको कानुनले स्थानीय किसानलाई गाँजा खेती गर्ने अनुमति दिन्छ। उनीहरूले उत्पादन गरेको गाँजा कानुनी रूपमै आधिकारिक पसलमा बेच्न सक्छन्,’ अर्थशास्त्री तथा शोधमा सहभागीमध्ये एक इभेलिना ग्याभ्रिलोभाले भनिन्, ‘यसले अवैधानिक लागुऔषध कारोबारीलाई निरुत्साहित गर्छ। किसानले गाँजा कारोबारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले अवैधानिक कारोबार कम भएको छ। र, हुँदै जानेछ।’
क्यालिफोर्नियामा गाँजा खुला भएपछि आधिकारीक केन्द्रमा गाँजा बिक्री गरिदैँ। तस्बिरः एपी
अवैधानिक कारोबार कम भएसँगै यससँग सम्बन्धित अपराध कम भएको हो।
‘अवैधानिक कारोबारी आफूजस्तै अर्को कारोबारीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ। बिक्री गर्ने इलाकाका निम्ति लड्छ। त्यस्तै अर्काले राखेको गाँजा चोर्छ र आफैं बेच्न खोज्छ। यी सबै प्रक्रियामा उनीहरूबीच झगडा सिर्जना हुन्छ, जसले अपराधको स्वरूप लिन जान्छ,’ ग्याभ्रिलोभाले प्रस्ट्याइन्, ‘यस्ता अपराध लुकाउन पनि उनीहरूले थप अपराध गर्छन्।’
गाँजा खुला भएपछि भने सीमा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि कम भएको उनी बताउँछिन्।
मेक्सिकोका त्यस्ता संगठित कारोबारीले कोकिन, हिरोइन, मेथामफेटामाइनजस्ता लागुऔषध पनि कारोबार गर्छन्। यसमा सबभन्दा धेरै गाँजा नै हो। यसबाट धेरै नाफा हुने भएकाले उनीहरू यसैमा बढी ध्यान दिन्छन्। मेक्सिकोमा करिब आधा किलो गाँजा उत्पादन गर्न ७५ डलरभन्दा बढी लागत लाग्छ। यति लागतमा उत्पादित गाँजा गुणस्तरअनुसार ६ हजार डलरसम्म बिक्ने गरेको छ।
ग्याभ्रिलोभा र उनका सहकर्मी ताकुमा कमाडा र फ्लोरिस जोटम्यानले फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबिआइ) को तथ्यांक हेरेर यो नतिजा निकालेका हुन्।
एफबिआइको अपराध प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणअनुसार गाँजा खुला हुँदा सबभन्दा बढी अपराध क्यालिफोर्नियामै कम भएको छ। यहाँ १५ प्रतिशत अपराध कम हुँदा एरिजोनामा ७ प्रतिशत कम भएको छ। यस्ता अपराधमा मुख्यतया चोरी, लुटपाट १९ प्रतिशत कम भएको छ भने हत्या १० प्रतिशत घटेको छ। लागुऔषधसँग सम्बन्धित हत्या ४१ प्रतिशत कम भएको छ।
यो अध्ययनले अमेरिकामा हुने लागुऔषध सम्बन्धी अपराध कम गर्ने नयाँ दृष्टिकोण दिएको अध्ययनकर्ताहरूको दाबी छ।
‘जब अपराध यस्तो उल्लेख्य रूपमा कम भइरहेको छ भने गाँजा पूर्ण खुला गरिनुपर्छ,’ ग्याभ्रिलोभा भन्छिन्, ‘यसलाई अवैध बनाउनुभन्दा बरु मान्छेलाई कर तिर्न लगाउनुपर्छ।’
क्यालिफोर्नियामा गाँजा खुला भएपछि आधिकारीक केन्द्रमा गाँजा किन्न लामबद्ध ग्राहक तस्बिरः एपी
अहिलेसम्म अमेरिकाका २० भन्दा बढी राज्यमा गाँजा खुला भइसकेको छ। कतिमा औषधीय प्रयोजनका निम्ति मात्र खुला छ भने कतिमा मनोरञ्जनका निम्ति पनि। यति हुँदाहुँदै अझै केही राज्य यसको विरोधमै छन्।
जहाँ खुला गरिएको छ, त्यहाँ प्रत्येक ६ वटा औषधि पसलका निम्ति एउटा गाँजा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ।
ग्याभ्रिलोभा र उनका साथीको यो अध्ययनले कोलोराडो र वासिङ्टनमा पनि गाँजा पूर्ण खुला गर्दा अपराध न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्ने देखाएको छ। यी राज्यमा अत्यन्त ठूलो मात्रामा लागुऔषध कारोबार हुन्छ, जसमा गाँजाको परिमाण सबभन्दा धेरै छ।
धेरै जसो अवैधानिक कारोबारी अचेल वैधानिक रूपमा गाँजा बिक्री गर्नतर्फ लागेको बताइएको छ। अध्ययन गर्ने क्रममा त्यस्ता कारोबारी आफैं गाँजा उत्पादनमा होमिएको पाइएको थियो।
केहीले भने गाँजा घाटाको व्यवसाय भएपछि अपराधको प्रकृति बदलेका छन्। यसमा मुख्यतया अपहरण र मानवबेचबिखन छन्। त्यस्तै केहीले अन्य किसिमका लागुऔषधमा हात हालेका छन्।
समाचार स्रोत:-फ्रीनेपालीन्युजबाट |
Prev७ वर्षीया अपांग बहिनी मीनालाई बोकेर विद्यालय जाने यी दाईलाई सम्मान स्वरूप शेयर गर्नुहोस
Nextभारतीय सीमामा नयाँ पिलर गाड्दा नेपाली भूमि मिचियाे, स्थानीय भन्छन् : तिरो तिरिरहेको जग्गा एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ? त्यहाँको पछिल्लो अवस्था यस्तो छ (पुरा विवरण हेर्नुहोस्)
धुर्मुसको जन्मदिनमा माग्नेबुढाले केक खुवाउदै सबैलाइ पेट मिचिमिचि हसाएर गरे यस्तो रमाइलो कमेडी(हेर्नुहोस भिडियो)
आज पैसा पठाउदै हूनुन्छ ? हेर्नुहोस साउदी, कतार दुबई,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ
बिहे भएको ४ महिनामै प्रियंका र निकको सम्बन्धविच्छेद ? यस्तो छ वास्तविकता हेर्नुहोस्…
विवादमा मुछिदै टंक बुढाथोकी : अशोक दर्जीले परिक्षानै नदिएको खुलासा, अशोकका बारेमा खुले यस्ता रहस्यहरु (भिडियो सहित)